रामेछापमा जन्मिएर राजधानीका सफल रेस्टुरेन्ट व्यवसायीः कुमार भण्डारी - तितोपाटी
रामेछापमा जन्मिएर राजधानीका सफल रेस्टुरेन्ट व्यवसायीः कुमार भण्डारी
कोसेलीन्यूज5months ago
आ.बि.बुढाथोकी – होटल रेस्टुरेन्ट व्यवसायमा कुमार भण्डारीलाई नचिन्ने कमै होलान । उबेलाको निकै बिकट मानिने रामेछाप जिल्लामा जन्मेर पनि राजधानीको एक सफल व्यवसायी सम्म आइपुग्दा कुमार भण्डारीले निकै उतार चडाब भोग्नु भएको छ । पैसा कमाउन विदेश नै जानु पर्दैन भन्ने एक अब्बल उदाहरण पनि उहा स्वयंले साबित गरेर देखाउनु भएको छ।
बुबा उदय बहादुर भण्डारी र माता कोटि कुमारी भण्डारी कोखबाट मिति २०३४/१२/०४ गतेको दिन उहाँको जन्म खाडदेबी गाउपालिका वार्ड नम्बर ८ भदौरे रामेछापमा भएको थियो । उहाँको परिवारमा दाई पछिका माइलो छोरो, एक भाई र दुई दिदी हुनुहुन्छ । मध्यम परिवारमा जन्मनु भएका भण्डारीले प्राथमिक शिक्षा आफ्नै गाउमा पुरा गनु भयो भने त्यसपछी ६ देखि १० सम्म श्री प्रयागेश्वर मा. बि. फुल्पा पकरवासबाट पुरा गर्नु भयो । उहाँले सो स्कुललाइ सक्दो आर्थिक सहयोग गर्नु भयो र आहिले त्यहाँ डिग्री सम्मको पढाइ हुन्छ। उहाको पालामा १० सम्म हुन्थ्यो त्यहिबाट उहाँले २०५० सालमा फस्ट डिभिजनमा एसएलसी पास गर्न सफल हुनु भएको थियो । उहाले पढेको स्कुल भदौरेमा अहिले बिबिएस सम्म पढाइ हुन्छ र अहिलेका बिद्याथीलाई निकै सहज भएको छ नत्र दुई घण्टा हिंडेर पकरवास पुग्नु पर्थ्यो ।
उच्छ शिक्षाको लागि जब उहा राजधानी छिर्नु भयो तब उहाँका संघर्षका दिन शुरु भए । जावालाखेलको रोयल फास्टफुड एन्ड केक सपमा वेटरको रुपमा काम गर्दै मिन भबन क्याम्पस आइ कम अध्ययन गर्न थाल्नु भयो । आइकम पास गरे पछि २०५४ सालमा नेपाल आर्मीको क्याडेटमा अफिसरको लागि दर्खास्त दिनु भयो तर सफल नभए पछि पुनः आफ्नै काममा इमानदारिका साथ लाग्नु भयो । सिनियर वेटर, क्याप्टेन, क्यासियर हुँदै सोही रेस्टुरेन्टमा उहाँ म्यानेजर पद सम्म पुग्नु भयो र यो अबधिमा उहाँलाई विदेशी कयौ गेस्टहरुले विदेश लैजाने अफर दिए तर उहाँको मन मानेन र एक दिन आफ्नै पेशा गरेर आँफै साहु हुने दृढविश्वासका साथ अघि बड्दै २०५७ सालबाट सुरुमा रिगल इमेज क्याफे थापाथलीबाट व्यवसायिक यात्रा शुरु गर्नु भएको हो ।
त्यतीबेला सम्म उहाँले बि कम सम्मको पढाइ सम्पन्न गरी सक्नु भएको थियो । आफ्नो व्यवसायमा बिस्तारै सफल हुँदै गए पछि उहाँले २०५९ सालमा कोटेश्वर निवासी क्याप्टेन लाल ब. कार्की र सीता कार्कीको कान्छी छोरी सरिता कार्कीसँग विवाह बन्धनमा बाधिनु भयो । उहाँको जिबन सङगिनिले पनि आफ्नो व्यवसायमा निकै साथ,सहयोग दिएकै कारण उहाँ आजको स्थितिमा पुग्न सफल हुनु भएको हो । उहा अहिले दुई जुडुवा छोरा र एक छोरी आफ्नै बलबुताले बनाएको घर कोटेश्वरमा बस्नु हुन्छ ।
फास्ट फुड एसोसिएसनको पुर्व सदस्य समेत रही सक्नु भएका भण्डारीले काठमान्डौ भ्यालीका १४५ फास्ट फुड तथा क्यापेको हकहितमा समर्पित भएर आबाज उठाउदै आउनु भएको छ। टिभी मिडिया र पत्र पत्रिकामा एक सफल युबा व्यवसायी भनेर निकै चर्चा गरिने उनै कुमार भण्डारी अहिले सबै विदेशीन खोज्ने युबाहरुका लागि प्रेरणाका श्रोत साबित भएका छन । इमानदारी,लगन, संयमताका साथ लागेमा सफल हुन कुनै देश जानु पर्दैन भन्ने उहाँले साबित गरेर देखाउनु भएको छ । आफ्नो व्यवसाय सँगै दर्जनौ सामाजिक संघ सस्थाहरुमा आबद्द भण्डारी दिन दुःखीहरुलाई दिल खोलेर सहयोग गर्न रुचाउनु हुन्छ । सामाजिक कार्यका लागि भनेर उहाले कमाएको १० प्रतिशत रकम सदैब छुट्याएर राख्नु हुन्छ र त उहाँलाई कहिले बाल आश्रममा, कहिले ब्रिद्द आश्रममा त कहिले दिन दुःखीको घर आगनमा पुगेको देख्न सकिन्छ । सामाजिक कार्यमा सकृय रुपमा लागेका कारण उहाँलाई बिभिन्न प्रमाण पत्र र कदर पत्रका साथ संघ सस्थाहरुले सम्मान गरेका छन ।
सामाजिक कार्य संगसँगै धार्मिक कार्यमा पनि त्यतिकै सकृय रुपमा लागि पर्ने कुमार भण्डारीले बिभिन्न मठ, मन्दिर, क्लब, टोल सुधारमा पनि सक्दो सहयोग पुर्याउदै आउनु भएको छ । आफू जहाँ पुगे तापनि आफ्नो जन्म थालो र आफ्ना माता पितालाई कदापी भुल्नु हुन्न भन्ने सोच राख्नु हुने उहाँ बेला बेलामा आफ्नो जन्म थलो रामेछाप पनि पुग्नु हुन्छ र बिभिन्न धार्मिक कार्यको आयोजना गरेर आफ्ना माता पिताको इच्छा पुर्याउनु हुन्छ । गाउँका स्कुल तथा अन्य सामाजिक संघ संस्थालाई पनि उहाँले खुलेर आर्थिक सहयोग गरेका कारण लोकप्रियता कमाउनु भएको छ । आफ्नो र आफ्नो परीवारको जन्म दिन कुनै बाल आश्रम या ब्रिद्द आश्रममा पुगेर केक काटेर मनाउन रुचाउने भण्डारी अलि भिन्न र उदार स्वभाबका हुनु हुन्छ । २०७७ सालमा आफ्नो गाउँमा बुबा आमाको पैत्रिक सम्पतिबाट स्वास्थ्य चौकी बनाउन २ रोपनी माथि जग्गा निःशुल्क सबै परिवारको तर्फबाट उपलब्ध समेत गराउनु भएको छ । रामेछाप जिल्ला सभापतीको समन्वयनमा जग्गा दान समेत गर्ने पवित्र काम गरेर ३,४ बडाका रोग लागेकाहरुको लागि उपचार गर्ने ठाउँ सित्तैमा उपलब्ध गराएर गाउँमा उल्लेखनिय काम गराउन सफल हुनु भएको छ ।
आफुले गरेको पेशामा उहाँ पूर्ण सन्तुस्ट पनि हुनु हुन्छ । यही पेशाबाट उहाँले छोरा छोरीलाई राम्रो स्कुल कलेज बढाउनु भएको छ भने भने जस्तो ठाउँमा आफ्नो बास पनि खडा गर्न सक्नु भएको छ । स्वदेशको कमाइले उहाँले विदेशी जिबन बिताएको देखे तापनि वास्तविक रुपमा सामान्य ब्यक्तित्व हुनु हुन्छ । व्यवसाय बिस्तार गर्ने क्रममा उहाँले बिगत १८ वर्ष देखि एभरेस्ट क्याफे भाटभटेनी सन्चालन गर्दै आउनु भएको छ र त्यही एभरेस्ट क्याफे सन्चालन सँगै कोटेश्वर चोकैमा सिङ्गै घर लिएर एभरेस्ट फुड्ल्याण्ड पनि १ वर्षसम्म सन्चालन गरि आफ्नो ब्यस्तताले गर्दा सो फुडल्याण्ड आफ्नो पाटनरलाइ छोडेर अनि एभरेष्ट क्याफे भाटभटेनीमा मात्र लागिराख्नु भयो ।
आफु बाचौ र दिन दुःखीलाई पनि बचाउ भन्ने उच्च सोचका साथ अघि बढ्नु भएका भण्डारीले इन्द्रेणी ग्रुपको पनि एक हिस्सा मालिकको रुपमा स्थापित हुनु हुन्छ । अहिले पछिल्लो समय भण्डारीले इन्द्रेणी ग्रुपको महाराजगन्ज र बसुन्धरामा पनि सेयरहोल्डरको रुपमा स्थापित हुनुभएको छ र आगामी दिनका लागि कयौ योजनाहरु बनाएर यही पेशामा समर्पित हुने अठोटका साथ लागि पर्नु भएको छ । अहिलेका युबाहरुका प्रेरणादायी ब्यक्तित्व भण्डारी निकै सहयोगी भाबका हुनु हुन्छ र त उहाँका हरेक कार्य सफल भएका छन । आफ्नै लगनले कमाएको पैसाले विश्वका दर्जन भन्दा ज्यादा देश पर्यटकको रुपमा परिवार सहित घुम्न भ्याएका भण्डारीका आगामी दिनमा युबाहरुलाई लक्षित गरेर केही नयाँ योजना बनाउने र नेपाली श्रम विदेशी भुमिमा खर्चन कम आउने कुरामा विस्वस्त हुनु हुन्छ । पहिलाको तुलनामा आफ्नो गृह जिल्लामा पनि निकै बिकास भएको र युबाहरुले पनि पहिलाको तुलनामा धेरै रोजगारीको अबसर पाएकोमा निकै खुशी ब्यक्त गर्नु हुन्छ । हामीले जति दु:ख र कष्ट भोगेर यो स्थानमा आइपुगेका छाैं भाबी पुस्ताले आधा मात्र मेहनत गरे पनि भविष्य उज्वल देख्छु भन्नु हुन्छ ।
August 26, 2020 4:42 pm | Ads, ट्रेन्डिङ, पर्यटन, फिचर न्युज, राम्रो नेपाल, विचार/ब्लग
राष्ट्रपति देशको राष्ट्रपति हो कि नेकपाको एउटा गुटको ? -गगन थापा, नेता-नेपाली कांग्रेस
तीतोपाटी - नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बडामहारानी बन्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । ‘म यो देशमा…
तितोपाटी- नेकपाको दाहाल-नेपाल समूहका अध्यक्ष माधव नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशमा अशान्ति फैलाएको आरोप लगाएका छन् । दाङको घोराहीमा…
तितोपाटी- परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले प्रबुद्ध व्यक्ति समूह ‘इपीजी’को प्रतिवेदन भारतले बुझ्नुपर्ने बताएका छन् । ज्ञवालीले शनिबार विहान नयाँदिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमा…
विश्व व्याडमिन्टन जुनियरतर्फको वरियताक्रममा प्रिन्स दाहाल तेस्रो स्थानमा
सस्तो लोकप्रियताका लागि चिप्लिए भित्ते राष्ट्रपति देखि फित्ते पत्रकार सम्म
तहस-नहस राजनीति, शुभेच्छुक समेत अन्याेलमा
इन्डोनेसियामा ६.२ म्यग्निच्युडको शक्तिशाली भूकम्प जाँदा कम्तिमा ६७ जनाको मृत्यु
भारतको कर्नाटकमा बस र ट्रक ठोक्किँदा कम्तीमा ११ जनाको मृत्यु
बद्री पंगेनीकै शैलीमा कोमल वली, ओलीको प्रशंसामा गाइन् गीत